Sida Loo Xisaabiyo Xisaab Inay Ilaaliso YouTube
Software & Apps Browsers & Internet
Waxa laga daawan karo YouTube
01 ee 08
Isku qor Soocitaanka YouTube
Uma baahnid xisaab si aad u daawato fiidiyowyada YouTube, laakiin waxay caawineysaa. Iyadoo xisaabta YouTube ah, waxaad kaydin kartaa fiidiyowyo si aad u daawato mar dambe, samee boggaaga YouTube-kaaga oo leh joornaalada YouTube-ka aad jeceshahay, oo waxaad heshaa talooyin ku habboon oo loogu talagalay fiidiyowyada YouTube si aad u daawato.
Si aad u qorto akoon bilaash ah oo YouTube ah:
Furan YouTube adiga oo adeegsanaya browserka aad jeceshahay kombiyuutarkaaga
Guji Sign Up at top of shaashadda.
Geli macluumaadkaaga sida loo codsaday.
Laga soo bilaabo halkaas, waxaad u qaabeyneysaa xisaabtaada YouTube.
Waxyaabaha Laga Heli Lahaa Screen
Marka aad gasho YouTube, waxaa laguu soo bandhigayaa qaybta lagu taliyey ee fiidiyowga oo ah bogga aad dooratay adiga oo ah sawirro la mid ah kuwii hore. Qaybtaasi waxay ka kooban tahay doorashooyin xayeysiin, filimooyin dhowaan la soo dejiyey iyo jaangooyooyin caan ah ee qaybaha ay ka mid yihiin Entertainment, Society, Lifestyle, Sports iyo kuwa kale oo ku kala duwan taariikhdaada goobta.
Waxa kale oo lagu soo bandhigay qaybta Watch Watch Again ee fiidiyowyada aad horey u soo aragtay, iyo qaybta muusikada muusikada muusikada. Dhamaan kuwan waxay ku jiraan shaashadda furan ee YouTube. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo lagu fiirsado haddii aad ogtahay meesha aad fiirinaysid.
Raadi Shabakadaha YouTube
Riix baraha liiska ku yaal geeska bidix ee kore ee shaashadda YouTube si aad u furato gudiga dhinaca navigation. Hoos u dhigo si aad u ogaato Waddooyinka oo guji. Qeybta kore ee shaashadda furan waa taxane taxane kuwaas oo matalaya qaybaha kala duwan ee fiidiyowyada aad daawan kartid. Tilmaamyadani waxay matalaan:
Caan ku ah YouTube
Riix mid ka mid ah tabsiyada si aad u furtid bogag leh fiidiyowyada qaybtaas oo aad daawan kartid.
Daawo Live Live
Laga heli karo shaashada Live Live screen shaashadaha, Youtube wuxuu bixiyaa wararka akhristaha, bandhigyada, riwaayadaha, iyo qaar kaloo badan. Waxaad arki kartaa waxa soo bandhigay, maxaa hadda ku ciyaaraya nool iyo waxa soo socda. Waxaa jira xitaa badhanka gacanta ah oo kuu ogolaanaya inaad ku darto xasuusin ku saabsan duruusta soo socota ee aadan rabin inaad seegto.
Ka daawo filimada YouTube
Youtube wuxuu bixiyaa filim badan oo ah filimyo hadda jira iyo kuwo lamid ah oo lagu heli karo kirada ama iibka. Riix DVD-yada YouTube-ka ee ku yaal dhinaca bidixda ama filinka Muuqaalka ee shaashadaha Kormeeraha si loo furo screen-ka xulashada filinka. Haddii aadan arkeynin filinka aad rabto, waxaad isticmaali kartaa goobta raadinta ee dhinaca kore ee shaashadda si aad u raadiso.
Riix sawirka thumbnail-ka ee filinka si aad u aragto fiidiyaha filimka.
Ka badbaadi fiidiyowga YouTube si aad u daawato mar dambe
Fiidiyow kasta lama kaydin karo si loo daawado mar dambe, laakiin dad badan ayaa laga yaabaa. Marka lagu daro fiidiyowyo liiska filimka 'Later Watch', waxaad heli kartaa markaad haysato waqti dheeraad ah si aad u daawato.
Ka bax shaashadda buuxda haddii aad ku daawaneyso qaab-buuxa-buuxa.
Ku dhaji xariiqda astaanta muuqaalka isla markiiba fiidiyaha
Guji Add to icon, oo leh calaamad dheeraad ah.
Riix sanduuqa ku xiga si aad u sii socotid si aad u badbaadiso fiidiyowga Liiska Play Later. Haddii aadan arkeynin xulashada Khariidadda Later, fiidiyowga lama kaydin karo.
Markaad diyaar u tahay inaad daawato fiidiyowyada aad kaydisay, waxaad tagtaa qaybta muraayada bidixda ee shaashadda (ama guji baararka raajada si aad u furto) oo guji Dabagalka dambe . Shaashadda furan waxay soo bandhigi doontaa dhamaan sawiradaada la keydiyay. Kaliya guji midka aad rabto inaad daawato.
Ka daawo YouTube on Big Screen
YouTube Leanback waa interface ah oo loogu talagalay inay ka dhigto mid raaxo leh daawashada YouTube on screen weyn. Fiidiyeyaasha oo dhan si toos ah ayay u ciyaaraan si buuxda HD-ga, si aad dib ugu tiirsato oo u daawato shaashadda TV-gaaga haddii aad haysato qalab ku haboon. Isticmaal mid ka mid ah qalabka soo socda oo loogu talagalay fiidiyaha HD:
Wii iyo Wii U
Ka daawo YouTube on qalabka Mobile
Iyadoo smartphone ama kiniin, waxaad daawan kartaa YouTube meel kasta oo aad leedahay internet-ka. Waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijka YouTube ama galitaanka bogga moobiillada ee YouTube iyada oo loo marayo browser-kaaga qalabkaaga. Ka daawashada cajaladaha YouTube-ka ee telefoonkaaga ama kiniiniga ayaa aad ugu riyaaqaya shaashad aad u sarreeysa iyo isku xirka Wi-Fi
10ka Chromebook Apps Best 2018
Tijaabada Jadwalka Jadwalka
Sida Loo iibsado ama Kirada Kaararka Loo Yaabka Loo Furo Filim Dhameystiran
Taariikhda Kanaalka Heerka Weyn
Netflix Streaming Movies iyo TV
Samee oo soo dir Kaararka Caawinta Kaararka
Qalabka Cuntada oo bilaash ah
Ka hor intaadan Dooro Adeeg Bixiyaha Adeegga Telefoonada
Dib u soo celi Outlook-ka PST-ga iyo Faylka Faylka
Metadata waxay meel kasta oo aad tagtaa ku qortaa
Sida loo maamulo boggaga ugu sarreeya ee Safari
9da Gawaarida ugu Wanaagsan ee Iibsiga ee 2018
IMovie 11 Jadwalka - Jadwalka ama wakhti aan xadidnayn
Sida loo Diido Google Buzz ee Gmail
Sidee Loo Bixin Karaa Xafiiska 365 Isticmaalida Windows
Talooyin Waxqabad Mackodu: Ka Daawo Qalabka Gaariga ee Uma baahnid
Siyaabaha Lagu Helo Maktabada Muusikada Muusikada
Waa Maxay Multihoming?
Sida loo furo Emails Sidee by Side in Yahoo! Boostada
# Qeexitaanka Hashtag
Soo bandhigida kamaradaha GE
Sababta Iskudhafka Dual-Band waxay ku Fiican yihiin Isgaadhsiinta Guriyeynta Wireless
Heerka 5: Asaasiga
Waa maxay Dogpile, iyo sideen u isticmaalaa?
5 Kulan ee ugu Fiican ee Ciyaaraha Preteens (PC)
Layrs: Layer Adequate Layout Editing App For Photography
Tusaha iPad-ka Bilowga Habboon
Dib u eegid: Word Solitaire HD for iPad
Sida loo habeeyo Moto Z Motorola Moto Z